Nandeha fiarandalamby araka izay faran’ny lavitra vitanay izahay ary avy eo nandeha an-tongotra nandritra ny ora maro, nihananatona hatrany ny sisin-tanin’i Alemana Andrefana. Voara-maso tanteraka ireo sisin-tany ireo kanefa nanana sarintany izahay ary fantatray ny fotoana sy ny toerana tsara hiampitana. Tsapako ny fitaintainan’ny reniko. Dinihiny tsara ilay faritra mba hijerena sao dia nisy nanaraka izahay. Toa nihanalemy ny tongony sy ny lohaliny isaky ny nanao dingana iray. Nampiako izy nilanja ilay harona feno sakafo, antontan-taratasy manan-danja ary sarim-pianakaviana teo am-pihanihana ilay havoana farany sady avo. Tena nieritreritra izy fa efa dify ny sisin-tany kosa izahay teo. Rehefa tsapany fa tsy misy zavatra atahorana dia nipetraka izahay ary nanomboka nihinana ny sakafom-p